Amazon Smile: Sida loo dejiyo oo loogu deeqo Element lacag la'aan ah!
Sida loo sameeyo Amazon Smile smile.amazon.co.uk
AmazonSmile waa adeega suuq-geynta shirkadda Amazon ee u ogolaanaya macaamiisha in ay bixiyaan deeq-bixin samafal ah mar kasta oo ay ka dukaameystaan ​​Amazon (marka la isticmaalayo Amazon Smile).
Deeqahan ayaa laga yaabaa inay u muuqdaan kuwo yaryar, laakiin waxay ku kordhinayaan. Kaliya £ 25 waxay u ogolaataa Element inay bixiso deeq lacageed mid ka mid ah barnaamijyadeenna loogu talagalay dhalinyaro dhibaateysan.
Markasta oo macaamiishu ku soo gasho smile.amazon.co.uk Amazon ayaa ku dari doonta boqolkiiba qiimaha saafiga ah ee loogu talagalay malaayiin ka mid ah alaabooyinka u qalma. Ma jiro kharash dheeraad ah ama kharashka macaamiisha ama samafalka!
Xusuuso inaad dooratid Ururka Element ka hor intaadan bilaabin wax gadashada!
1. Raac xiriirkaan si aad u hesho Bulshada Element ee AmazonSmile https://smile.amazon.co.uk/gp/chpf/homepage/ref=smi_se_scyc_srch_stsr?q=element+society
2. Guji Xulo
3. All sameeyey!
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan siyaabo kale oo lagu taageerayo shaqada ururka Element Society riix halkan.